Diki / Pakati / Yakakura Vhoriyamu - Pandawill Technology Co, Ltd.
PaPandawill Circuits, tinogamuchira kubvunza kwePCBB kune chero vhoriyamu yemabhodhi, kubva padunhu rimwe chete kusvika kumavhoriyamu makuru anopihwa kwenguva yakatarwa. Semazuva ese kuyedza kwedu kwese kuve nechokwadi kuti zvisinei nevhoriyamu, iwe unowana mabhodhi akaunzwa pamutengo wemakwikwi zvakanyanya uye nenguva yekuendesa.
Maitiro ekuverenga, kutora mazwi uye pakupedzisira kupa maPCB haana kumbosiyana kunyangwe diki kana hombe vhoriyamu uye isu tinokoshesa vatengi zvakaenzana, zvisinei maPCB i'hupfumi hwechiyero 'chigadzirwa, zvinoreva kuti mitengo yakanakisa inogona kuwanikwa kana isu tiri inokwanisa kugadzira mabatch makurusa anokwanisika.
Kune makuru emabhodhi evhoriyamu, isu tinopa sarudzo yeanenge akarongwa ekuendesa kana isu tinogona kubatsira nemastock manejimendi masevhisi ekupa chaizvo chaiyo nhamba chaiyo yemabhodhi anoenderana neyako yemwedzi yekugadzira chirongwa. Isu tinopawo mari yekuchengetedza kune avo vatengi vakagadzirira kutora 100% yemasheya nekukurumidza sezvo zvichitibatsira, uye tichagovana mukana iwoyo newe.
Pandawill ichapa mutengo zvichibva pahuwandu hwegore rose hwemabhodhi, asi igovanisa huwandu hwekugadzira hwehuwandu hukuru pamatanho akati wandei madiki. Izvi zvichaita kuti mabhodhi ave neakareba kwazvo akawanikwa masherufu-hupenyu.
Isu tinofara kukupa iwe munzira iri nyore kwazvo uye inochinja-chinja yekuita zvaunoda.